Ngwa ịchekwa batrị na ekwentị gị | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa 5 iji chekwaa ndụ batrị na ekwentị gam akporo gị
Zọpụta batrị na ama anyị Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ niile ga-eburu n'uche kwa ụbọchị, ọkachasị ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahapụ ụlọ anyị n'ụtụtụ ma ghara ịlaghachi ruo etiti ehihie ma ọ bụ ọbụlagodi n'abalị. Ọ dabara nke ọma, ekwentị mkpanaaka jikwaa batrị ha nke ọma ma nye anyị ohere inwe nnwere onwe ka ukwuu, mana ha erubeghị ogo na anyị nwere ike ichefu batrị ole anyị hapụrụ.
Oge ole na ole gara aga anyị nyere gị gị 10 na-akpali Atụmatụ ịzọpụta ndụ batrị na gị ama na taa anyị kpebiri laghachi ibu na-egosi gị 5 ngwa nke ịzọpụta batrị na mkpanaka gị na ngwaọrụ, nke fọrọ nke nta ka ị maghị na nke ahụ ga-aba uru n'ezie n'ụbọchị gị taa. N’ezie anyị ahapụla gị njikọ njikọta maka ngwa niile, ka ị nwee ike iwunye ha ugbu a na ekwentị mkpanaaka gị.
Tupu ịmalite nyocha nke ngwa ndị a anyị chọrọ igosi gị taa, anyị ga-agwa gị na nsonaazụ ya dị mma, mana na ọ dịghị onye na-atụ anya ka ha mee batrị ahụ ụbọchị atọ kama nke otu ka ọ na-adịkarị, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eju anya . Ha bụ ngwa na-enyere aka, oge ụfọdụ dị ukwuu, mana nke ahụ agaghị eme ka batrị anyị dịkwuo ike.
1 DU Batrị nchekwa
2 Battery Agbachitere
5 Snapdragon Batrị Guru
DU Batrị nchekwa
Iji bido na ndepụta a, anyị ga - egosi gị otu ngwa kachasị ebudatara na Google Play, metụtara isiokwu metụtara anyị taa, yana nke dị nso iru nde nde ise na kpakpando ise. Nke a abughi nnwale doro anya, mana n'ọtụtụ oge ọ na-ewere na anyị na-eche ngwa dị ezigbo mma, nke na-agbaso ihe ọ na-enye. Ọ baghị uru ikwu, na ịnọ na ndepụta a, anyị nwere ike ikwenye nke ahụ Du Batrị nchekwa Ọ na-enye anyị ụfọdụ atụmatụ na-atọ ụtọ ma ọ kwesịrị idozi na ngwaọrụ gị.
The free version nke a ngwa na-enye anyị a njikarịcha zuru ezu nke ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo na kwa ohere nke ịhọrọ ụdị nzọpụta dị iche iche, inwe ike mepụta ọnọdụ nzọpụta anyị, na-ekwusi ike pụrụ iche na nkọwa ndị masịrị anyị kachasị
DU nchekwa batrị - ịchekwa batrị & optimizing
Battery Agbachitere N'ezie, ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị dị mfe ị hụrụ, mana okwu a na-ekwu na mgbe ụfọdụ, ọ kachasị mfe kachasị dị irè. Ekele maka ngwa a, anyị ga-enwe ike ịme ihe ndị bụ isi ma bara uru dị ka ịgbalite ma ọ bụ deactivating WiFi na-akpaghị aka, deactivating njikọ mgbe anyị na-ehi ụra ma na-achịkwa ọtụtụ usoro ndị ọzọ bara uru.
Ikekwe ịchekwa batrị adịghị mma, mana ị ga-ahụrịrị ya na ngwụcha ụbọchị ma ọ bụrụ na iji Baterry Denfeder.
Na mgbakwunye, yana ka ị ghara ịmalite itinye nsogbu na ngwa a, enwere ike ibudata ya n'efu na ụlọ ọrụ ngwa ngwa Google ma ọ bụ ihe bụ otu Google Play. N’okpuru ị nwere njikọ kwụ ọtọ iji budata ya ugbu a na Smartphone gị.
Batrị Agbachitere-batrị azọpụta
Developer: Ozi gbasara ụlọ ọrụ INFOLIFE LLC
Ngwa a bu ihe ozo di iche iche banyere nchekwa batrị na njikarịcha ebe ọ pụtara na ụlọ ahịa gọọmentị nke Android KitKat. N'oge ahụ enwere ike iji ya na ngwaọrụ nwere ohere mgbọrọgwụ, mana taa Greenify enwere ike imelite ya na ụdị ngwaọrụ ọ bụla.
Ọrụ nke ngwa a dabere na chọta usoro ndị na-adịghị mkpa n'ime ama ma ọ bụ mbadamba anyị, wee hapụ ha n'ọnọdụ ezumike. Nke a pụtara na usoro ndị a anaghị eri ihe na batrị na-enweghị isi ruo mgbe ị ga-eji ya ọzọ.
N'ọtụtụ oge, iji ngwa a na - akpata usoro ndị na - agba n'azụ iji rie obere akụrụngwa na batrị. N'ezie, nsogbu bụ na ụfọdụ ngwa ndị fọdụrụ na ndabere agaghị arụ ọrụ nke ọma n'ihi na enweghị ike imelite ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu n'iji ngwa izi ozi ngwa ngwa n'ụzọ dị nkenke ma ọ bụ obere, ngwa a abụghị maka gị.
JusticeDefender bụ ihe ọzọ dị iche iche na ụdị ngwa ọdịnala, nke ọtụtụ iri puku mmadụ na-eji kwa ụbọchị iji chekwaa batrị na ngwaọrụ mkpanaka ha ma ọ bụ mbadamba ha. Dị ka ngwa ndị ọzọ nke ụdị a na-enye gị ohere nwee njikwa njikọ dị iche iche nke ngwaọrụ gị mgbe niile ma ọ bụ mepụta profaịlụ ichekwa batrị.
A na-enye ya ugbu a na Google Play na nsụgharị atọ dị iche iche, otu n'ime ha n'efu na ndị ọzọ akwụ ụgwọ. Nkwado anyị bụ ka ịnwale ngwa nbudata n'efu ma ọ bụrụ na ọ kwenye gị ma ọ bụ na ịchọta ezigbo ọrụ, kpochapu akpa gị ma jiri euro dị egwu na ụdị Plus ma ọ bụ Ultimate.
JuiceDefender - nchekwa batrị
Snapdragon Batrị Guru
Ngwa nke anyị ga-egosi gị ọzọ, e mere gị baptizim na aha Snapdragon Batrị GuruDị ka ị pụrụ iche n'echiche, ọ na-ezubere naanị maka ndị mobile ngwaọrụ na-efego a processor arụpụtara site Qualcomm, nke bụ ugbu a nnọọ ole na ole na ahịa.
Mgbe etinyere na ọdụ gị, ọ ga-adị ka ngwa a anaghị eme ihe ọ bụla, mana anyị nwere ike ịsị na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enweghị oke mkpọtụ. Ma ọ bụ na nke mbụ ọ ga-anakọta ozi banyere ihe niile anyị ji ekwentị anyị eme, wee kwụsị ngwa niile ị na-ejighi.
Na mgbakwunye, n'abalị ọ ga-elekọta ọ bụghị naanị ịhapụ ngwa dị iche iche na-adịghị arụ ọrụ, mana ọ ga-agbanyụkwa akara ikuku, nke doro anya na anyị agaghị eji ya mgbe anyị na-ehi ụra.
Dị ka nkwanye, gbalịa ịwụnye ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ nwere Qualcomm processor ka ngwa ahụ ga-adị kpamkpam Naanị ihe ọ ga-eme bụ weghara ebe nchekwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Developer: Ahụmịhe ejikọtara Qualcomm, Inc.
Njikere ịmalite ịchekwa ndụ batrị site na nnukwu ngwa ndị a?. Nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta, ebe anyị na-atụ anya na ị nwere ike ịgwa anyị gbasara ngwa ndị ọzọ nke ụdị a nke ị na-eji ụbọchị gị kwa ụbọchị iji chekwaa ma jikwaa nnwere onwe nke batrị nke ekwentị mkpanaaka gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwa 5 iji chekwaa ndụ batrị na ekwentị gam akporo gị
Ihe niile anyị nwere na E3 2016 ruo ugbu a
PS4 Neo, ihe egwuregwu Sony ọhụrụ nke anyị ga-ahụ na E3 2016 na-esote